2) Dabballee ABO fi kan TPLF Finifine keessattii namni wal biraa qabee ilaalee nama aja’ibaa ture. Kan ABO wayyabnii yeroo kophee adiidasn ya’an kan TPLF barbaasoon deemaa turan. Yeroo kan TPLF Mooraa jiraan keessatti of hojeetanii nyaatan, kan ABO mana Foonii magalaa keessatti dabaree dhiphiisuu turan. Mooraa Gulaalee keessaa Nadhii, Gutamaa, Dawud fi Toleeraa irra kan hafee hunduu Hoteelaa dhiphiisaa ture. Wan gafaas barsiifametu har’aa dhaabichaaf ba’an guddaa maatii qabsa’otaa tajajiluu tahee jira……
Kutaan Afraffaa ittii fufa…
Tags Abo gaadidduu siyaasaa
Previous Waamicha Hawaasa Oromoo Suwiidin
Next Keemikaalli duuch-balleessaa waraanaa dhoksaan gara Tigraay galuun himame